‘सोसल मिडियामा सभ्य तथा सचेत बनौं र इञ्जोय गरौं’ « News24 : Premium News Channel
‘सोसल मिडियामा सभ्य तथा सचेत बनौं र इञ्जोय गरौं’
अनुमानका भरमा देश यता जान्छ र उता जान्छ भन्नेहरुको गफ सुन्यो भने त्यसै–त्यसै ट्वाँ परिन्छ । चोक–चोकमा भेटिने गफाडीहरुको एक–दुई कप उधारो चिया सक्ने मेलोलाई पत्याएर अर्को जमघटमा पुगेर कुरो यस्तो हो भनेर आँफैले देखेजसरी देशको र समाजको स्थितिको सप्रसंग व्याख्या गर्नेहरुको कुरा नसुन्नु फाइदाजनक छ ।
अब के हुन्छ भन्ने कुरा प्रचण्ड, ओली, नेपाल, देउवालाई त थाहा छैन, त्यो ३ महिनादेखि चियाको उधारो नतिर्ने टुक्रे गफाडीलाई थाहा हुन्छ कँही ? विदेश तिर भए खेलकुद र मौसम सम्बन्धि कुरा नै आम मानिसको गफको विषय हुन्छ, कतिलाई त आफ्नो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री को हो ? भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।
हामीकहाँ मात्रै हो, देशका कुना काप्चामा चुनाव उठेर जमानत समेत जफत भएकाको पनि तीन पुस्ते कण्ठ हुने । यो सब फुर्सद हुुनुको कमाल हो । र्फुसदीलाहरुले चोक गल्ली हुँदै सामाजिक सञ्जालमा समेत गफ चुटिरहेका छन् र त्यही गफ चुटाई हेरेर देश त खत्तम बर्बाद नै भएको जस्तो अनुमान गर्न धेरै मान्छे विवश छन् ।
विदेश तिरको प्रसंग चलिहाल्यो । हामीकहाँ जस्तो कामै भएपनि सामाजिक सञ्जालमा २४ घण्टा अनलाइन बस्न पाउने सुविधा हुन्न विदेशमा । कोही–कोही अपवाद हुन सक्छन् तर एक्ज्युकेटिभ लेवलका जागिरेहरुले समेत लञ्च ब्रेक भन्दै आधा एक घण्टाको समय पाउँछन् ।
र, त्यही समयको सुविधा सदुपयोग गर्दै खाना–खाजा खाएर बचेको समयमा परिवारलाई यसो एक कल गर्ने र त्यसपछि पनि समय मिले समाचारको लागि सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हुन् । फुर्सदीला केही विद्यार्थीहरु वा नवयुवाहरु सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्महरुमा रमाइलो पोष्ट गर्छन् र इञ्जोय गर्छन् ।
हामीकहाँ फरक छ । सामान किन्न ग्राहक पसल भित्र छिरिसक्यो साहुजीको आँखा फोनमै छ । न स्वागत, न मुस्कान, मानौ त्यो ग्राहक आइदिएर साहुजीलाई डिस्टर्व भैरहेको छ । अफिसमै बसेर काम गर्नेको पनि पूरा ८ घण्टा फेसबुक, ट्वीटरबाट २ मिनेट आँखा बाहिर आउँदैन ।
कारण गफ, हल्ला, टिका–टिप्पणी, गाली गलौज, धारेहात, सरापले भरिपूर्ण सञ्जाल जति हेरेपनि सकिदैन, औधी रमाइलो । त्यसमाथि सनसनीपूर्ण हेडलाइनसहितको न्युज देखेपछि पूरा न्युज पढ्ने खोइ फुर्सद ?
त्यो न्युज कुन चाँही डटकमले राखेको हो ? त्यो डटकमको विश्वसनियता के हो ? त्यो डटकम के कस्तो हो ? भन्ने हेर्न २ मिनेट समय हुन्न हामीसँग । सीधै गाली ! वा सीधै भयंकर तारीफ ! ५ देखि १० मिनेटमा खोल्न मिल्ने डटकमहरु अचेल हाम्रो फुर्सदलाई ध्यानमा राखेर यस्तै गैर जिम्मेवार न्युजहरु दिइरहेका छन् ।
कसैको स्वार्थ पूरा गर्न, कसैको चरित्र हत्या गर्न, अनि विवादस्पद विषय र शिर्षक राखेर पैसा कमाउन सञ्चालित न्युज पोर्टलहरु र च्यानलहरुको सामग्री हेर्नासाथ ३ हात उफ्रिनु जरुरी छैन । बरु ३ मिनेट लगाएर त्यसको फ्याक्ट चेक गर्न जरुरी हुन्छ ।
त्यस्तो ठूलो भयानक बिषय भए मुलधारका ठूला–ठूला मिडियाले पनि त्यो कुरा प्रकाशन प्रशारण गर्थे । डबल चेक गर्न अन्य नयाँ, पूराना विश्वास बटुलेका मिडियाहरुका साइटहरु पनि भिजिट गरेर फ्याक्ट चेक गर्न सकिन्छ । अनि त्यसपछि गाली गर्ने भए गाली, ताली पिट्नु पर्ने भए ताली पिटे हुन्छ ।
अर्को एउटा कुरा पनि थप्छु गाह्रो नमान्नु होला । हामीमध्ये केहीको सोच यस्तो छ कि, आफ्नो जाती वा समूदायको मानिसका बारे नराम्रो खबर आए त्यसलाई त्यसै बचाउने र अर्को जाति वा समूदायको भए पानीमूनी गएपनि नछोड्ने प्रवृत्ति हावी छ ।
कुनै जाती वा समुदाय खराब हुँनै सक्दैन । एउटा व्यक्ति असल हुँदा उक्त जाति वा समूदायले एक रत्ती पिर माँन्नु पर्दैन । एउट व्यक्ति खराब भएर सिंगो जातिको पहिचान, इतिहास र गौरवमा एक रौ बराबर पनि असर गर्दैन । यो २१ औं शताब्दीमा एट लिष्ट यति कुरामा त सहमत होऔँ । एक नम्बरको फटाह लामिछाने पनि देख्या छु । १ नम्बरको गौ प्राणी लामिछाने पनि भेट्या छु ।
फटाह लामिछानेहरुलाई फटाह भन्न म त १ सेकेण्ड पनि सोच्दिन । सामाजीक सञ्जालमा फुर्सदीलो बनेर असामाजिक बहस, क्रिया प्रतिकृया जनाउँदा सरकारले यसमा कडाइ गरिदिन सक्छ । त्यसैले सभ्य बनौं, सचेत बनौं र यसलाई इञ्जोय गरौं । छेउमै बसेको आफ्नो परिवारको सदस्य साथीभाईको चाँही मतलब छैन ७ समुद्रपारीको अस्ती चिन्या ब्राण्ड न्यु साथीसँग चाँही औंलाले फोननै प्वाल पर्ला जसरी च्याट मात्रै गर्नु के ठीक होला र ?
त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा हजारौ तिरेर तपाईले आफ्नै पैसाले किनेको फोन वा कम्युटर, आफैले सयौं तिरेर किनेको इन्टरनेट डाटा । आफ्नै बाबु आमाले वा आँफैले स्कुल कलेजलाई त्यत्रो पैसा तिरेर आर्जन गरेको बृद्धी, आफैले पैसा तिरेर किनेको घर वा भाडा तिरेको कोठामा बसेर अर्काले जे पोष्ट गरिदियो त्यसैलाई हो भनेर बुद्रक–बुद्रुक उफ्रिनु राम्रो कि बुझेको राम्रो हो, आँफै सोच्नु होला । खर्च तपाईको रजाई डटकम वालाको नहोस् ।